नेपालमा पुष्पखेती र सम्भाब्याता
नेपालको भू-धरातल उदेक लाग्दो छ र यही पक्ष नै हाम्रा लागि वरदान हो । भू-धरातलकै कारण सानो क्षेत्रफलमारको देश भइकन पनि जलाबायू विविधता र जैविक विविधताका लागि नेपाल विश्वभरी प्रसिद्ध छ । हामी कहाँ दक्षिणमा तराइको अण्डा उसिनिने गर्मी देखि उत्तरमा हिमालको बाह्रै महिना हिउँले ढाकीरहने क्षेत्रहरु छन् र नेपालको उत्तर दक्षिण
दुरी औषत १४५ कि.मी. रहेको छ । यस्तो भू-बनोटबाट नै जमिनको भिरालोपनको आकलन सजिलै गर्न सकिन्छ । १४५ कि.मी.को दुरीभित्र समुद्र सतहबाट ६० मी. उचाइ देखि विश्वकै अग्लो स्थान सगरमाथा (८८४८ मी.)हाम्रो मुलुकको सानो क्षेत्रफलमा अवस्थीत छ । ६० मि. देखि ८८४८ मि. बिच हामी कहाँ कति किसिमका जलवायू र विविधता होलान् सजिलै अड्कल गर्न सकिन्छ । मौसमविदहरुका अनुसार नेपालमा ६ किसिमका ऋतु पाइन्छन् जुन विश्वका अति कम देशहरुमा मात्र पाउन पकिन्छ । उनीहरुका अनुसार नेपालको दक्षिणबाट उत्तर लाग्दा हरेक १०० मी. भन्दा कम उचाइको फरकमा फरक-फरक किसिमका जलबायू पाइन्छन र यही विशेषतानै हाम्रा लागि सबभन्दा ठूलो वरदान साबित भएको छ । नेपालको भू-धरातलहाई तराइ (१७%), पहाड (६८%) र हिमाल (१५%) गरी ३ भागमा विभाजन गरिएको छ । तराइको मौसम औसत किसिमको छ र जमीन समतल छ । हरेक किसिमका खेतीका दृष्टिकोणले तराइलाई स्वर्ण भूमि मानिन्छ । पूष्पखेतीकालागि नेपालको तराइ भूमि अति उत्तम मानिएको पाइन्छ । तराइमात्र नभइ पहाड तथा भित्री पहाडको जलवायू पनि पूष्पखेती तथा अन्य खेतीका दृष्टिकोणले उत्तिकै प्रभाबकारी तथा उपयोगी मानिएको छ । तर नेपालको जमीन भिरालो भएका कारण यस विशेषतासंग सुहाउने बोटबिरुवा तथा बालीनाली छान्नु पर्ने हुन्छ । पहाड तथा मध्य पहाडका भिराला जमीनहरु एक वर्षिय बोटबिरुवाका लागि भन्दा बहुवर्षिय बोटबिरुवाहरु हुर्काउनका लागि अति नै उपयूक्त मानिन्छन् । भिरालो जमीनमा पानी नअडिने र सिंचाइमा सम्स्या हुने हुनाले जरा धेरै गहिरो जान नसक्ने एक वर्षिय बोटबिरुवा भन्दा जरा गहिरो जाने बहुवर्षिय बोटबिरुवा उपयूक्त मानिन्छन् । यस्ता जमीनमा जरा गहिरो जाने बोटबिरुवाहरुले केवल उत्पादन मात्र नभई भू-क्षय, बाढी, पहिरो अतिबृष्टि, अनाबृष्टि, पानीको स्रोत संरक्षण र वातावरण स्वच्छ राख्न ठूलो योगदान पुर् याउँछन् ।
आजभोलि नेपालमा पनि पुष्पखेती गर्ने क्रम बढ्दो गतिमा छ र दिन प्रति दिन लोकपि्रय बन्दै गैरहेको छ । नेपालमा पुष्प खेतीको इतिहास त्यति लामो छैन र छोटै समयमा यसले राम्रो उपलब्धी हासिल गरेको छ । पहाडका केही जिल्ला र तराइमा पुष्पखेती गरिदै आइएको छ र यो शुरुको अवस्था भएका कारण अझै पनि नेपालमा पूष्पखेती प्रयोग र परिक्षण कै अवस्थामा छ । नेपालमा पुष्प खेती शुरू गरीएको पहिलो जिल्ला चितवन हो । पुष्पखेतीका दृष्टिकोणले नेपालको चितवन जिल्ला सबभन्दा उपयुक्त मानिएको छ । बर्तमान सन्दर्भमा यातायातको दृष्टिकोणबाट पनि यो जिल्ला उपयूक्त मानिएको हो । नेपालमा पुष्पखेती फैलिदो अवस्थामा छ । साथै बढ्दो आधूनिकीकरणका कारण सजावटमा प्रयोग गर्ने
कटफ्लावरको माग पनि बढ्दै गैरहेको छ । नेपालमा गरिने पुष्प खेतीले आन्तरीक माग पुरा गर्नुको साथै सानो संख्यामा निर्यात समेत गदैं आइरहेको छ । तर केही विशेष किसिमका कटफ्लावरहरु आयात पनि गर्ने गरिएका छन् ।
हाल नेपालका तराइ, उपत्यका र केही पहाडी जिल्लाहरुमा समेत पुष्पखेती गर्दै आईएको छ ।